समाचार(News) in Nepalese Women: All about women in Nepal -
वाईफाईको प्रयोगबाट बम पत्ता लगाउन सकिन्छ
भाद्र १, काठमाडौं । वाईफाईको प्रयोग गरेर सार्वजनिक स्थलमा हतियार वा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउन सकिने अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। ती अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार वाईफाई सार्वजनिक स्थलमा हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने सस्तो प्रविधिको रूपमा विकसित हुनसक्छ। रट्गर्ज विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा गरिएको एउटा अध्ययनले वायरेस अर्थात् विनातार प्रसार हुने सङ्केतहरूले झोलाभित्र रहेका वस्तुबारे जानकारी दिनसक्छन्। त्यसबाट खतरनाक धातु तथा तरल पदार्थ वा विस्फोटक रसायनको परिमाणबारे जानकारी पाउन सकिन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले...
मङ्गल ग्रहमा तरल अवस्थामा पानी विद्यमान
अनुसन्धानकर्ताहरूले मङ्गल ग्रहमा तरल अवस्थामा पानी विद्यमान रहेको प्रमाण फेला पारेका छन्। उनीहरूले फेला पारेर प्रस्ताव गरेको जलाशय सो ग्रहको दक्षिणी ध्रुवमा अवस्थित हिमवत् क्षेत्रमुनि रहेको छ र त्यो झन्डै २० किलोमिटर चौडा छ। यसअघि गरिएका खोज अनुसन्धानहरूले मङ्गल ग्रहको सतहमा कहिलेकाहीँ मात्र अस्थायी रूपमा पानी बगेको हुनसक्ने देखाएका थिए। तर स्थायी रूपमा नै तरल अवस्थामा पानी फेला परेको देखाउने यो पहिलो प्रमाण हो। यसअघि नासाको क्युरिओसिटी रोभर भनिने अन्तरिक्ष वाहनले पुराना र सुख्खा तालहरूका पिँधको अन्वेषण गर्दा त्यहाँ पहिला पानी रहेको पत्ता लागेको...
बालबालिकाका लागि इन्टरनेट हानिकारक
भदौ १६, काठमाडौं। बालबालिका मामिलासम्बन्धी एकजना ब्रिटिश आयुक्तले अभिभावकहरुले आफ्ना सन्तानलाई सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा बढी समय बिताउनबाट रोक्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन्। अब्जर्भर पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा एन लङफिल्डले बालबालिकाको बढी समय बिताउन भनेर ठूला सामाजिक सञ्जालहरुले अवलम्बन गरिरहेका विधिको ‍आलोचना गरिन्। उनले बिदाको समयमा केटाकेटीलाई इन्टरनेटमा टाँसिरहन नदिन अभिभावकहरु आफैं अग्रसर बन्नुपर्ने उनको भनाई छ। बालबालिका मामिलासम्बन्धी आयुक्त लङफिल्डले यो विषयमा अभिभावकहरुलाई मद्दत पुर्याउन अभियानकै घोषणा गरेकी...
एक महिलाले बनाइन् ८१ वर्षको उमेरमा आइफोन एप
काठमाडौं। सिक्ने र सिर्जनात्मक काम गर्ने कुरालाई उमेरले छेक्दैन । जापानकी एक वृद्धाले यसलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिएकी छिन् । ६० वर्षको उमेरमा मात्र कम्प्युटर सिकेकी एक जापानी महिलाले ८१ वर्षको उमेरमा आइफोन एप निर्माण गरेकी छिन् । ४३ वर्षसम्म जापानको एक बैंकमा काम गरेकी पूर्व बैंकर मसाको वाकामियाले रिटायर्ड भैसकेपछि मात्र ६० वर्षको उमेरमा कम्प्युटर शिक्षा लिएकी थिइन् । कम्प्युटर सिक्ने आफ्नो निर्णयले आफ्नो पूरै जिन्दगी बदलिदिएको उनको भनाई छ । इन्टरनेटको जादुमय दुनियाँको हिस्सा बनेकी मसाकोलाई आफ्नो यो नयाँ संस्कार खुुब मन परेको छ । हालै उनले �...
धेरै मोबाइल चलाउने व्यक्तिको मस्तिष्कमा असर पर्ने
काठमाडौं। मोबाइल फोन अहिले सबैका लागि सम्पर्कको सजिलो माध्यम भएको छ । अब यो फोन कुराकानीका लागि मात्र प्रयोग गरिँदैन, इन्टरनेट चलाउन तथा मनोरञ्जन र ज्ञानका अनेक प्रयोजनमा समेत यसकै प्रयोग हुन थालेको छ । यसलाई अब कम्प्युटरजस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले हिजोआज युवादेखि प्रौढसम्मका हातमा मोबाइल देख्न सकिन्छ । स्कुल–कलेजदेखि शौचालय अनि बिछ्यौनासम्म मोबाइलले साथ दिने गरेको छ । कार वा बाइक अनि साइकल नै किन नहोस्, मोबाइलमा आएको फोन उठाउन हातमा रहेको हेन्डलले अप्ठेरो पार्दैन, जसले सडक दुर्घटना पनि बढाएको छ । हुन त अहिले मोबाइल फोन स्टाइल स्टेटमेन्ट...
काठमाडौं : स्विवेकशील साझा पार्टीकी नेतृ रञ्जु दर्शनाको चरित्र हत्या हुने गरी समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै प्रहरीले अर्का अनलाइनका सम्पादकलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुको टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–३ निवासी क्यापिटल हेडलाइन डटकमका सम्पादक २७ वर्षीय सुमन अधिकारीलाई काठमाडौँको नयाँबजारबाट पक्राउ गरेको हो । अधिकारी सम्पादक रहेको क्यापिटल हेडलाइनसहितका केही अनलाइनले नेतृ रञ्जुमाथि कार्यालयमै विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले बलात्कार गर्न खोजेको झुटो समाचार प्रकाशित गरेका थिए...
महिलामाथि फतुर लगाउने कानूनमन्त्रीको पद चट्(भिडियोसहित)
साउन ८, काठमाडौं । जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरुले आफ्नै बोलीमा लगाम नलगाउँदा कसरी फस्छन् भन्ने उदाहरण बनेका छन् कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ । उनले आफ्नो बोलीमा लगाम नलगाउँदा मन्त्री पदबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सोमबार अबेर रातिसम्म बसेको बैठकले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन गलत रहेको पुष्टि गर्ने नाममा बोल्ने क्रममा बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुले सर्टिफिकेट पाउन...
स्थानीय निर्वाचनमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ : राष्ट्रपति
काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवलगायत आयुक्तसँग वैशाख ३१ का लागि तय गरिएको स्थानीय निर्वाचनको तयारीका बारेमा जानकारी लिएकी छन् । शीतलनिवासमा भएको परामर्शमा प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनको तयारीमा आयोग पूर्ण रूपमा लागेको अवगत गराएका थिए। उनले आयोगको तयारी युद्धस्तरमा अघि बढेको ब्रिफिङ गरेको जानकारी शीतलनिवास स्रोतले दिएको छ । यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, प्रदेश नं २ का ६ जिल्लामा मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न कठिनाइ भए पनि ती जिल्लामा निर्वाचन केन्द्र छिटै तोकिनेछ । राष्ट्रपति भण्डारीले...
असार १०, दमौली । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ पातीचौरमा सोमबार राति करेन्ट लागेर एक युवतीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सोही ठाउँ निवासी २८ वर्षीया सीता थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । माधव घिमिरेको घरमा डेरा गरी बस्ने तिलमाला आलेको घरमा पाहुना आएकी थापालाई बिजुलीको होल्डर सार्ने क्रममा करेन्ट लागेको थियो । करेन्ट लागेर घाइते उनको रत्नहरि अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । मृतकको शव परीक्षणका लागि दमौली अस्पतालमा राखिएको छ । ...
असार १०, लहान । सिरहा कर्जन्हा नगरपालिका–१ बन्दीपुरकी एक बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । घाँस काट्न गएकी १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीयवासी श्यामकुमार महरालाई पक्राउ गरेको हो । जङ्गलमा घाँस काट्न गएको बेला हिजो बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको बालिकालाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ । महरासहित चार–पाँच जनाको समूहले सामूहिक बलात्कार गरेको पीडित बालिकाले बताएकी छन् । पक्राउ परेका महरामाथि जबर्जस्तीकरणी ऐनअन्तर्गत कारवाही अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका...
असार ५, जाजरकोट । डोल्पाकी एक सुत्केरीको आज हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–२ की २० वर्षीया अनिसा बुढाको उद्धार गरिएको हो । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको सहयोगमा उनको हेलिकप्टरमा उद्धार गरिएको हो । बुढाको उद्धार गरी हेलिकप्टरमा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल लगिएको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीले जानकारी दिनुभयो । दुई दिनदेखि सुत्केरी हुन नसकेपछि उहाँको उद्धार गरिएको हो । अहिलेसम्म डोल्पाबाट हेलिकप्टरमार्फत सात सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ । ...
असार ५, अछाम । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा गङ्गादशहरा मेलामा गएकी एक किशोरी नौ दिनदेखि बेपत्ता भएकी छन् । अछामको साँफेबगर नगरपालिका–१२ खप्तड भेरासैनकी १७ वर्षीया देवीकुमारी रोकाया बेपत्ता भएकी हुन् । रोकाया गत जेठ २८ गते रातिदेखि हराएकी हुन् । गाउँकै साथीहरुसँग मेला भर्न गएकी रोकाया बेपत्ता भएको उनका बुबा धनबहादुरले बताउनुभयो । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र अन्यत्र खोजी गर्दा फेला नपरेको उहाँले बताउनुभयो । किशोरीको खोजी भइरहेको अछामका प्रहरी नायब उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले बताउनुभयो । उनी काडा भवानी मावि बाजुरामा कक्षा ९ मा अध्ययनरत रहेको रोकायाका...
असार ५, भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिका–२१ पार्वतीपुर बस्ने ३३ वर्षीया विमला कुमाल आज बिहान १०ः३० बजे नारायणी नदीको पुलबाट हाम फालेर बेपत्ता भएकी छिन् । पुलमा हिँडिरहेकी उनी एक्कासि नदीमा हाम फालेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ । पुलमा छाडेको झोलामा रहेको कागजातका आधारमा ती महिलाको पहिचान खुलेको र उनको खोजी भइरहेको नारायणगढ वडा प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि असार १ गते राप्ती नगरपालिका वीरेन्द्रनगरकी २१ वर्षीया कविता सापकोटा पनि स्कुटरबाट ओर्लेर सोही पुलबाट हाम फालेर बेपत्ता भएकी थिइन् । ...
भाद्र १७, काठमाडौं । फाप्लु, सोलुखुम्बुकी उर्मिला श्रेष्ठ गाउँका दलितको घरमा जाने, सँगै बसेर उनीहरूकै घरमा खाना खाने गर्छिन्। केही वर्ष अघिसम्म दलित र गैरदलित भनी फरक व्यवहार भए पनि पछिल्ला वर्षमा उक्त क्षेत्रमा त्यस्तो जातीय विभेद कत्ति पनि नरहेको उनी बताउँछिन्। फाप्लु र आसपासका क्षेत्रहरू सुर्के, यर्मादिङमा गरी करिब दुई सय घर दलित बस्ती रहेको छ। त्यहा शेर्पा, तामाङ, नेवार लगायत केही बाहुन र क्षेत्रीको पनि बसोबास रहेको छ। भात र भान्छा चल्छ उनीहरू हरेक क्षेत्रमा अब्बल छन्, उनीहरूका घर हाम्राभन्दा बढी सफासुग्घर छन्,श्रेष्ठले भनिन्, उनीहरूसँग बस्दा र...
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बाबु विदेशी भए पनि वंशजका आधारमा आमाले नेपाली नागरिकता लिएको भए उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने बाटो सहज बनेको छ । तर अंगीकृत लिने सन्तान नेपालमै जन्मेर नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । बाबुको नागरिकताका आधारमा कुनै सन्तानले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने मात्र त्यस्ता सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी खुकुलो व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ...
काठमाडौं। पोषणको आवश्यकता उमेरअनुसार परिवर्तन हुन्छ । उमेरको हरेक अवस्थामा स्वयंलाई स्वस्थ राख्न शरीरलाई प्रोटिन, मिटामिन एवं मिनरलको अलग–अलग मात्राको आवश्यकता हुन्छ । उमेरलाई ध्यानमा राखेर गरिने भोजनले मात्र मानिस स्वस्थ रहन्छ । किशोरावस्था– यो उमेरमा शरीरको मेटाबोलिक रेट धेरै हदसम्म बढ्छ । मानिसले खाने भोजन ऊर्जामा परिवर्तन हुन्छ । शरीरको विकासका लागि प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि दूधबाट उत्पादित वस्तु एवं मासु खानुपर्छ । हड्डी बलियो बनाउन क्याल्सियम आवश्यक हुन्छ । किशोरावस्थामा कंकालको बनावट हुने भएकाले क्याल्सियमयुक्त पदार्थ बढी...
असार १०, काठमाडौं (एजेन्सी) । पाँच विदेशी महिला र दुई बालबालिकाको नियतवश हत्या गरेको अभियोगमा ग्रिसेली मूलका साइप्रसका एक सैन्य अधिकृतलाई दोषी ठहर गर्दै सातवटा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ। उनले हत्या गरेकामध्ये एक महिला नेपाली नागरिक थिइन्। उनले हत्या गरेका दुई बच्चा छदेखि आठ वर्षका थिए। नेपाली महिलाको नाम अस्मिता खड्का बिष्ट भएको बताइएको छ। उनको गत वर्ष हत्या भएको थियो। अदालतले आफ्नो आदेश सुनाउनुभन्दा अघि ३५ वर्षीय निकोस मेटाक्सासले हत्या र अपहरणसम्बन्धी १२ वटा अभियोग स्वीकार गरेका थिए। ती घटनाहरू सेप्टेम्बर २०१६ देखि अगस्ट २०१८ सम्म भएका...
एउटै कोख तर फरक बुवाबाट जन्मिएका जुम्ल्याहा सन्तान
फागुन ६, एजेन्सी । एलेक्जेन्ड्रा र कोल्डर १९ महिनाका जुम्ल्याहा हुन्। तर उनीहरूका बुवा भने एउटै व्यक्ति होइनन्।एलेक्जेन्ड्राका पिता साइमन हुन् भने उनीसँगै जन्मिएका उनका जुम्ल्याहा भाइकोल्डरका पिता ग्रेएम हुन्। तर एउटै गर्भबाट एकैचोटि जन्मिएका सन्तानका भिन्नभिन्न पिता हुनु कसरी सम्भव छ ? चार बुवा, तीन देश र दुई सन्तान पिता बन्ने इच्छा भएका साइमन र ग्रेएम बर्नी-एड्वार्ड्जसमक्ष ठूलो चुनौती थियो। सरोगेट आमा मेग स्टोनले जन्माएका सन्तानसँग साइमन र ग्रेएम - उनीहरू शरीरबाहिर कृत्रिम परिस्थितिमा इन भिट्रो फर्जिलाइजेशनबाट एउटामात्र भ्रूण गर्भाधान गराउन...
बालबालिकालाई बेलुकी मोबाइल र टिभी अनुचित
माघ २८, काठमाडौं । प्रविधिको स्वस्थकर प्रयोगका लागि बेलुकी खानाको समय र सुत्ने समयमा मोबाइल फोनको प्रयोग निषेध गर्न ब्रिटेनका स्वास्थ्य प्रमुखहरूले सुझाव दिएका छन्। नयाँ निर्देशिकाका अनुसार बालबालिकाहरूलाई एक पटकमा दुई घण्टाभन्दा लामो समय मोबाइल फोन वा टिभी हेर्न दिनु उचित छैन। उनीहरूले प्रविधि कम्पनीहरूलाई बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न थप सावधानी अपनाउन पनि भनेका छन्। ब्रिटेनका स्वास्थ्य मन्त्रीले तस्बिर राख्ने सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामका प्रमुख अधिकारीहरूसँग आत्महत्यासम्बन्धी सामग्रीहरूका बारेमा भेट्ने तयारी भइरहेको समयमा निर्देशिका...
माघ २०, काठमाडौं । समग्र अनुहारको सौन्दर्यमा दाँतको उपस्थिती खास हुन्छ । सौन्दर्यको बर्णन गर्दै गीतहरुमा भनिन्छ, ‘मिलेका दाँतका पंक्ति ।’ साहित्यमा दाँतलाई सौन्दर्यकै हिस्सा मानेर उल्लेख गरिन्छ ‘अनारका दाना जस्ता मिलेका र मोती जस्तै चम्किला दाँत।’खासगरी सूर्ति, गुट्खा सेवन गर्नेहरुको दाँतमा खिया लागेको देखिन्छ । दाँतलाई उचित हिसाबले सफा नगर्दा दाँतमा खिया लाग्छ । धुमपान, कैफिन, सुर्तीजन्य पदार्थले त दाँतलाई कुरुप नै बनाउँछ । खिया लागेको दाँतलाई कसरी चम्किलो बनाउने त रु बेकिङ सोडा बेकिङ सोडालाई फोहर हटाउने प्राकृतिक उपायका लिन सकिन्छ ।...
माघ २०,काठमाडौं । तपाई जुनसुकै रोगको सिकार भएर जानुस् स्वास्थ्य संस्थामा तपाईले पाउने पहिलो सुझाव हो “पानी प्रशस्त पिउनुस् ।” पानी मात्रै पिउनु कति राम्रो कति नराम्रो रु स्वास्थ्य विषेशज्ञहरुले १० वटा फाइदा र बेफाइदा आम मानिसको हितका लागि जारी गरेका छन् । आउनुहोस् यसको बारेमा जानकारी लिउँ ।फाइदाहरुः– १। बिहान उठ्ने वित्तिकै १ गिलास पानी पिउने गर्नुहोस् । यसले तपाईको पेट सफा राख्न सहयोग गर्नेछ । पानी पिउने गर्नाले छालामा भएको रुखोपनमा कमि आउँछ ।२। विहान उठ्ने बित्तिकै मनतातो पानीमा कागती मिसाएर खाने गर्नुहोस् । यसले टक्सिक एलिमेन्ट शरिरबाट निकालेर...
फागुन २७, विराटनगर । पाँचौँ महिला साफ च्याम्पियनशिप फूटबल प्रतियोगिताको शिल्ड आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ । अखिल नेपाल फूटबल सङ्घ (एन्फा)द्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिल्ड सार्वजनिक गर्नुका साथै सहभागी टोलीका प्रशिक्षक र कप्तानसँग साक्षात्कारसमेत गराइएको छ । सो अवसरमा बङ्गलादेशका प्रशिक्षक गोलम रावानीले नेपाली टोली शक्तिशाली रहेको बताउँदै आफ्नो देश फाइनलमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भारतीय टोलीका प्रशिक्षक मामुल रवि र कप्तान फुसलता देवीले प्रतियोगिताको प्रथम स्थान हासिल गर्ने भन्दै फाइनलमा अन्य कुन देशको टोलीसँग प्रतिस्पर्धा...
पाँचौँ महिला साफ फुटबल मङ्गलबारदेखि विराटनगरमा हुँदै
फागुन २६, विराटनगर । पाँचौ महिला साफ फुटबल प्रतियोगिता मङ्गलबारदेखि विराटनगरमा शुरु हुँदैछ । मोफसलमा पहिलो पटक हुन लागेको उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल नेपाल र भूटानबीच हुनेछ । शहीद रङ्गशालामा हुने सो प्रतियोगिता आगामी चैत ८ गतेसम्म चल्नेछ । प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, मालदिभ्स र श्रीलङ्काको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको सहभागिता रहनेछ । प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ मा नेपाल, भूटान र बङ्गलादेश तथा समूह ‘बी’ मा भारत, श्रीलङ्का र मालदिभ्स रहको छ । प्रतियोगितामा भाग लिन भूटानको टोली आज विराटनगर आइपुगेको छ । सो टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ...
फागुन २६, काठमाडौं । शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता आगामी वैशाखमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को सहयोग एवं नेपाल भलिबल सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा हुने सो प्रतियोगिता आगामी वैशाख १० देखि १३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले सो प्रतियोगितालाई जापानको बहुराष्ट्रिय कम्पनी केएनपीले मुख्य प्रायोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा केएनपी जापानका नेपाल प्रमुख मनोजकुमार मिश्र र शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानका...
पाँचौँ महिला साफ फूटबल प्रतियोगिता फागुन २८ देखि चैत ८ गतेसम्म हुने
फागुन १३, विराटनगर । दक्षिण एशियाली फुटबल प्रतियोगिता (साफ) र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना हुने पाँचौं महिला साफ फूटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विराटनगरमा फागुन २८ देखि चैत ८ गतेसम्म हुने सो प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का र मादिभ्सको सहभागिता रहनेछ । स्थानीय शहीद रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको एन्फाका उपाध्यक्ष तथा खेल तयारी समितिका संयोजक पङ्कज विक्रम नेम्वाङले बताउनुभयो । साफ महिला फुटबलका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले रु एक करोड र प्रदेश नं १ ले रु ५० लाख...
महिला एकलतर्फ टेनिसको उपाधि चीनकी लिउले जितिन्
माघ २६, चिप्लेढुङ्गा । पोखरामा सम्पन्न टेनिस प्रतियोगिताअन्तर्गत महिला एकलतर्फको उपाधि चीनकी ले यि लिउले जितिन् । फाइनल खेलमा बुल्गेरियाकी भिक्टोरिया भेलेभालाई ६–३, ६–१ को सेटमा पराजित गर्दै लिउले प्रथम स्थान हासिल गरिन् । उनले पनि आइटीएफको ३० अङ्क प्राप्त गरिन् भने दोस्रो भएकी भिक्टोरियाले १८ अङ्क आफ्नो खातामा जोडिन् । यस्तै, १८ वर्ष मुनिको डिभिजन पाँच आइटीएफ टेनिस प्रतियोगिताको उपाधि जापानका जेनी इनोले जितेका छन् । पोखरा रङ्गशालामा आज सम्पन्न फाइनलमा हङकङका केल लोक इन ताङलाई ६–३, ६–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै जेनीले सो उपाधि हात पारेका...
असार ३, एजेन्सी । महिला फुटबल विश्वकपमा थाइल्याण्डको टोलीबारे सोचौँ। उनीहरू १३-० को अन्तरले अमेरिकासँग पराजित भएका थिए, जुन फिफाले आयोजना गर्ने महिला फुटबल खेलको इतिहासमा सर्वाधिक हो। तर कुनै पनि खेलाडीले त्यसको निराशालाई मैदानमा पोखिन भने दिएनन्। उनीहरूले अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वी सरह पाँचवटा मात्र 'फल' प्रहार गरे, जुन प्रतियोगितामा गरिएको फलमध्ये दोस्रो कम हो। पुरुषहरूको खेलमा शारीरिक पाटो र अनुशासन निकै ठूलो मुद्दामध्ये एक मानिन्छ। प्रदर्शन सन् २०१८ को विश्वकपमा सबैभन्दा ुराम्रोु प्रदर्शन गर्ने जर्मन टोली थियो। उक्त टोलीले तीनवटा खेलमा २९ पटक...
जेठ १६, काठमाडौं । जाम्बियामा जन्मेकी ४७ वर्षीया सारा खुमालो सगरमाथा चढ्ने अश्वेत मूलकी प्रथम अफ्रिकी महिला बनेकी छन्। यसअघि उनले तीन पटक सगरमाथा आरोहणको प्रयास गरेकी थिइन्। असफल भए पनि ढृढ सङ्कल्प र आत्मविश्वास भए सफलता पाउन सकिने बताउँछिन्। आफ्नो सफलताले अफ्रिकी महिलालाई मात्र नभई संसारभरि रहेका महिलालाई प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ। दुई छोराकी आमा खुमालोले सगरमाथाको शिखरमा पुग्दा आफ्नो परिवार र आफूलाई त्यहाँसम्म पुग्न सघाउने सबैलाई सम्झेको बताउँछिन्। शिक्षा र अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाका लागि आर्थिक सङ्कलन गरेर उनीहरूको जीवनमा...
फागुन २२, एजेन्सी । अमेरिकाकी काइली जेनर आफ्नै बलबुतामा अहिलेसम्मकै संसारको सबैभन्दा कान्छी अर्बपति बनेकी छन्। फोर्ब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को अर्बपति सूचिमा परेकी २१ वर्षीया जेनरले आफ्नो भाग्य शृङ्गारका सामानको व्यवसायबाट कोरेकी हुन्। उनको कम्पनी काइली कस्मेटिक्सले गत वर्ष मात्र आफ्नो बिक्रीबाट ३६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गरेको थियो। उनी चर्चित कार्ड्याशियन परिवारकी सदस्य हुन्। एक्काइस वर्षमै अर्बपतिको सूचीमा पर्दा उनले फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकर्बर्गलाई पनि उछिनेकी छन्। कान्छा अर्बपतिका रूपमा सूचीकृत हुँदा...
फागुन २१, काठमाडौं । साउदी अरेबियामा मानव अधिकार अवस्थाबारेको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा पछिल्लोपल्ट जीवनरक्षाका निम्ति गुहार मागिरहेका दुई महिला जोडिन पुगेका छन्। रवन (परिवर्तित नाम) सँग पछिल्लो छ महिना आफ्नो जीवनको व्याख्या गर्ने एउटा मात्र शब्द छ-त्रास। मृत्युदण्ड दिइन सकिने देशमा फर्काइने त्रास र कानुनी अन्योलमा रहेका उनी र उनकी बहिनी रीमले कम्तीमा १३ पटक ठेगाना परिवर्तन गरेका छन्। पारिवारिक बिदाका क्रममा भागेका साउदी अरेबियाका यी दिदी-बहिनी हङकङमा अलपत्र छन्। घरमा हिंसात्मक दुर्व्यवहार बेहोरेको र पुरुष नातेदारबाट घरेलु कामदारूको जस्तो...
फागुन १३, काठमाडौं, (एजेन्सी) । साउदी अरेबियाकी राजकुमारी रिमा बिन्त बन्दर अल(साउद अमेरिकाका लागि साउदी राजदूत हुने भएकी छन्। उनी साउदी अरेबियाबाट राजदूतको जिम्मेवारी पाउने पहिलो महिला बन्नेछिन्। शनिवार उनको नियुक्तिको खबर शाही आदेशमार्फत् सार्वजनिक गरिएको हो। राजकुमारी रिमाले आफ्नो बाल्यकालको केही समय वाशिङ्टन डिसीमै बिताएकी थिइन्। साउदी राजकुमारी रिमाले आफ्ना भाइ युवराज खालिद बिन सलमानले निर्वाह गर्दै आएको राजदूतको भूमिका अब आफूले निभाउन लागेकी हुन्। युवराज खालिद भने देशको उपरक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। राजकुमारी रिमाले अमेरिकाका लागि...